အဝါရောင် Max Booster-CPU Cooler၊ Max Booster Cleaner APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဝါရောင်မက် Booster-CPU ကို Cooler ကမူ Max Booster Cleaner
အဝါရောင်မက် Booster-CPU ကို Cooler ကမူ Max Booster Cleaner APK ကို
ကြိုတင်မက်အာနိသင်တိုးမြှင့်နက်ရှိုင်းစွာစင်ကြယ်သော, ဖုန်း max ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဟာ android app ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုံးစံ၌ဖုန်းကိုပိုကောင်းအောင်။ ကြိုတင်မဲအာနိသင်တိုးမြှင့်နှင့်အတူရီးရဲလ်အချိန်ဖုန်းကိုတိုးမြှင့်, သန့်ရှင်းရေး, အအေးများနှင့်ဘက်ထရီစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။ သတ်ပစ်နှင့် CPU အသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့နောက်ခံ running ဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်, ဖုန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်အပူပြဿနာများအောင်မြင်သော, ဖုန်း leggy လုပ်ပိုဘက်ထရီစားသုံးပြဿနာ, နှေးနှေးနဲ့ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ အခုတော့စင်ကြယ်သောအေးမြ, ဤကြိုတင်အစာရှောင်ခြင်းအာနိသင်တိုးမြှင့်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်။ ပိုများသောသိုလှောင်မှုပိုအာကာသပိုမြန်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချောမွေ့, ကို clean up နှင့်သင့်ဖုန်းကို performance ကိုပိုကောင်းအောင်မယ့်တဦးတည်း tab ကိုပေါ်ရှိသင့် android ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်။ အခြေခံအားဖြင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်, kill တိုးနှင့်နက်ရှိုင်းသောစင်ကြယ်သောဖုန်းနောက်ခံ running Apps နဲ့ process ကိုရပ်တန့်။ ။ ဒါဟာတစ်ဦး max ကိုဖုန်းကို cache ကိုသန့်စင်, အမြန်နှုန်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း booster ကတော့သိုလှောင်မှု (junk & cache ကို) သင့်ဖုန်းနှင့်ဘက်ထရီနဲ့ save Optimizer များအတွက် Analyzer, ဖုန်း overheat ဖြေရှင်းချက်၏အဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်နှင့် CPU ကိုအေးကိုလျှော့ချတဲ့စုစုပေါင်း Android ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည် optimization ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ android ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ချောမွေ့ပါစေ။ ပိုပြီးအာကာသနှင့်ပိုပြီးသိုလှောင်ဖုန်းကိုဆေးကြောသန့်စင်ဖို့လွယ်ကူ။ ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်မော်နီတာဘက်ထရီကနျြးမာရေး။ apps များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစားသုံးမိုးသည်းထန်စွာဘက်ထရီကိုပိတ်လိုက်ပါ။ မက်စ်ပါဝါအမြန် Cleaner ဖုန်းကိုချအအေးနှင့် CPU ကိုအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့မြန်အအေး algorithm ကိုပေးပါသည်။
ကြိုတင် booster ကတော့သန့်စင်, booster ကတော့ CPU ကိုအေး၏အင်္ဂါရပ်များ
အားလုံးအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဖုန်းကို performance ကိုပိုကောင်းအောင်တ tool ကိုပါ။ CPU ကိုအေး, မြန် Booster, Fast စူပါသန့်စင်ကမူ Max ဘက်ထရီကျွမ်းကျင်သူများ၏ပေါင်းစပ်။
Cooler CPU ကို: ဖုန်းကိုချ Cool
CPU အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် android ဖုန်းကိုချအအေးဖုန်းကိုအပူနှင့်အအေး algorithm ကိုအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချ Cool ။ ရီးရဲလ်အချိန်အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် android ပြဿနာများ၏ဘုံအပူပြဿနာအောင်မြင်သောမှထိန်းချုပ်ထား။ မိုးသည်းထန်စွာအရင်းအမြစ်များနှင့်စားသုံး app များကိုပိတ်လိုက်ပါ။ စုံလင်သောထုံးစံ၌သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ကြောင်းအကောင်းဆုံး CPU ကိုအေး app ကို 2019 ။
မက်စ်ဖုန်း Booster, Boost ဖုန်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ပိုကောင်းအောင်သန့်ရှင်းရေးများနှင့်မလိုအပ်သောနှင့်နောက်ခံအပြေးဖြစ်စဉ်ကိုကအစာရှောင်ပါစေ။ ဖုန်းကိုမာစတာကာကွယ်ပေးသည်။ နေရာပိုယူနှင့်ဖုန်းနှေးကွေးစေကြောင်းစင်ကြယ်သော junk နှင့် cache ကိုဖိုင်များကို။ အစာရှောင်ခြင်းဖုန်းကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့ algorithm ကိုလုပ်တိုးမြှင်။ သငျသညျဖုန်းကိုနှေးကွေးပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကြိုတင်မဲအာနိသင်တိုးမြှင့်သည့်ဟာ android ဖုန်းများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမြန်ဆန်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစမတ်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ရှင်းလင်းရေးအားလုံးမလိုအပ်တဲ့ process ကို, တာဝန်, auto-စတင် apps များ။
မက်စ် Wi-Fi Booster: သင်၏ Wi-Fi Network ကို Boost
Wi-Fi Booster Analyzer များအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အင်တာနက်မြန်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေမ။
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘက်ထရီကျန်းမာရေးနှင့်၎င်း၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစောင့်ကြည့်။ ဘက်ထရီအနေဖြင့်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုချလျှော့ချ။ ကြာကြာဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်ဘက်ထရီ max ကိုအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ပိုကောင်းအောင်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတူ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်။
android ဖုန်းကိုသင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်ဘို့ app ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည် performance ကိုမြှင့်တင်ရန်တစ်ဦးကအစွမ်းထက် max ကိုဖုန်းကအာနိသင်တိုးမြှင့်။ အဆိုပါဖွင့်လာမယ့်အဆင့်အထိကအစာရှောင်ခြင်း, ချောမွေ့, max ကိုသန့်ရှင်းရေး, အစာရှောင်ခြင်းအေးမြနဲ့ Wi-Fi signal ကိုလုပ်ပါ။ လူအပေါင်းတို့သည် android ဗားရှင်းများအတွက် 2019 ၏မက်စ်အာနိသင်တိုးမြှင့်။ ယင်းဟာ android ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်လုံးဝအခမဲ့ app ကို။ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ဖုန်း Make မှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပိုမိုလျင်မြန်သောဖျန်လျှင်, သင့် Device ကို Leggy ဖြစ်လာ, Apps ကပကို run တဲ့အခါမှာအားလုံးအချိန် & ကြောင့် Overheats ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး; အဲဒါကိုတစ်လိပ်ဖုန်းသို့နှစ်မြောက်မွေးနေ့ခင်မှာဒါဟာဂရုစိုက်ရန်အချိန်ပဲ! NOW ကအခမဲ့အဘို့မှတ်ဉာဏ် Booster Cleaner: Fast နှင့်သင်၏ Device ကိုရဲ့ကနျြးမာရေး Restore
- Update ကိုချိန်ညှိမှုများ
အဝါရောင်မက် Booster-CPU ကို Cooler ကမူ Max Booster Cleaner
5.68 ကို MB